Iinkonzo kunye nokuxhatshazwa ngokwesondo kwiintsuku ezibalulekileyo
Ngaphambi komntu ngamnye kukho ukukhetha - ukulala ngesondo, okanye ukwenqaba. Kodwa ngeli xesha abafazi baninzi bafuna isondo, ukuba bona ngokwabo bayakwazi ukuthatha izinto zabo ngaphandle kokubuza umntu. Kwaye kule ndawo zikhona iingxaki, kuba amaqabane awavumi ukuba avumelane nesinyathelo esinjalo ngexesha elifanayo.
Iimigca zesini ngexesha leenyanga
Kukho umngcipheko wosulelo. Kwaye ingozi yokwesongela abafazi kunye namadoda. Oku kubangelwa ukubonakala kweebhaktheriya, apho igazi ngeli xesha lifanelekileyo lokuzalisa. Iibhaktheriya zingangena ngaphakathi ngaphakathi komlomo wesibeleko kwaye zibangele izifo ezikhokelela kwimiphumo emibi.
Amadoda asengozini ngenxa yokuba umsele we-urinary ungafumana umkhuhlane wamanzi kwaye ubangele ukuvuvukala kwe-purulent.
Enye ingxaki yokulala ngokwesini. Abalingani kufuneka bahambisane nemimiselo yococeko oluyimfuneko. Isimo esisinyanzelo sisamukelwa ngaphambi nangemva kwenkqubo. Ngaphambi kwexesha, lungisa itayilisi emanci kunye nelinen ecocekileyo. Ngaphantsi kwalo unako ukubeka i-clocloth ukuze ugweme ukuhlamba ilinen yelinen.
Akuyi kuba yinto engacacanga ukusebenzisa ikhondom. Nangona kunjalo, yena kuphela unokunceda umntu. Eli bhinqa liya kusengelwa yintsholongwane kwisondo.
Ngezinye izizathu eziphazamisana nesondo ngenyanga leyo, unokuthi unqulo. Ngokomzekelo, amaSulumane kwixesha elinjalo acinga ukuba owesifazane uyangcola, kodwa amaYuda ayiphatha ngokuzeleyo kwaye nangona kunjalo, kufuneka azinikezele uthando.
Enye into engafanelekanga yinkalo yobugcisa. Akuyena wonke umntu ovuthayo nomnqweno wokungcola ngegazi lokuya esikhathini. Akunjalo ngenxa yokuba ufuna ukusuleleka. Ngokulula, baninzi baphatha kakubi naluphi na ukukhutshwa kwimizimba yabesifazane, ikakhulukazi ngokuya esikhathini. Abanye bacinga ukuba ukwenza uthando ngexesha lokuya esikhathini kunokungcola nokuziphatha kakubi.
Iingxaki zoBusana ngokuPhezulu
Abaninzi abafazi ngelo xesha bafumana i-orgasm eqinileyo yezocansi, njengoko ukuhamba kwegazi ukuya kwizitho zangasese kukhuthaza ukuvuvukala kwesini, ngenxa yoko kubangela ukuba kunciphise ubukhulu kwaye buba nzima ngakumbi kwaye buncipheke.
Abanye abafazi banenhlanhla. Banciphisa intlungu ngexesha lokulala. I-spasms kunye ne-orgasm, shenxisa i-liquid eqokelele kwisibeletho, ngoko ukunciphisa ukuvuvukala kwaye, ngokufanelekileyo, intlungu iyancipha.
I-pluses ibandakanya ukwehla kwimijikelezo yokuya esikhathini, kuba emva kweengqungquthela, ukulahlwa kweeseli kwenzeka ngokukhawuleza, ngokulandelanayo, kwaye kulula ukuba ibhinqa.
Kukho amadoda enomdla kakhulu ngokulala ngeshini ngexesha lomfazi. Oku kunokwenzeka ukuba oku kubangelwa kukuba ubulili bufana nesenzo sesame-masochistic, kwaye loo mntu ufumana umdla okhethekileyo. Oku kusebenza kwiingenelo zengqondo, kuba kule meko kunokwenzeka ukwanelise iimfesane zakho ngaphandle kokwenza into engekho mthethweni. Kodwa kukho amadoda ambalwa. Bavusa kwakhona ukukhanga kumlingane, onamandla kunexesha eliqhelekileyo, kuba isondo sinxulumene nesiqhamo esinqatshelwe.
Ekubeni umngcipheko wokukhulelwa kunye neenyanga ziphela, unika ithuba lokuphucula amaqabane kunye nokwenene. Amadoda athola ngokukodwa, kuba umntu uyathanda ukulala ngesondo. Nangona kunjalo, amathuba okukhulelwa, nangona kungabalulekanga, uhlala. Isidalwa sinokuhlala emzimbeni wowesifazane ukususela kwiintsuku ezintlanu ukuya kwiveki! Ngoko, musa ukulibala malunga nokukhulelwa.
Nangona kukho ukuba kuninzi lwezinto ezilungileyo kunye neempembelelo ngexesha lokuya esikhathini, isigqibo sokugqibela sisalingana nawe kunye neqabane lakho. Into efunekayo ukuba uzinyamezele kweli bali aliyikulibala ukuzikhusela, ugcine ingcoce kwaye uhlonele umnqweno womnye. Ukuba omnye wenu akafuni ukuya ngesondo - musa ukumcinezela.Uya kuphepheka ukuba uhlale phantsi kwaye uxoxe ngawo onke amaxesha afanelekileyo okanye angakulungiseleli isizathu esinye okanye enye. Akukho cebiso elivela apha livumelekile. Le yinkqubo ecwangcisekileyo kunye neengxakini kuphela. Eyona nto ingathandekiyo ukuba ukwazi ukuba iimfihlo zobomi bakho obusondeleyo aziwazi nje kuphela.
Indlela yokufunda ukuba ibe ngaphandle kweengxaki kwiibhedi
Imida ye-Ero, i-P kunye ne-U: i-G
Iseluleko malunga nendlela yokwandisa i-libido
Ngaba ucinga ukuba ubulili bobuhlobo?
Kutheni abantu bebukela iphonografi?
Ukwabelana ngesondo njengesiqhelo: ubudlelwane obuvela kumntu obuthandayo
Amagqabhagqabha a-Whitening: uphawu
Imaski eyenziwe ngobumba obomvu
Iintlobo ezi-5 eziphezulu kakhulu zekhofi kwihlabathi
Kutheni kubonakala amanqaku omdaka endaweni yeenyanga?
Ukukhula nokunyamekela igumbi lamakhiwane
Indlela yokufumana umfazi okhulelweyo
Indlela yokususa ukuvuvukala kwamehlo wezinyembezi? Iingcebiso eziNcedo
IKrismesi turkey kunye nama-oranges
I-Blackberry jam jam
Izikhonkwane zeCod phantsi kwe-crust
Izityalo ezingaphakathi ziyanceda
Udlala njani nomntwana ekhaya?
I-Shurpa esuka emthonjeni - isitya esinomdla kubafundi be-cuisine zaseMpumalanga
UFilip Kirkorov ulungiselele ukuvalelwa kukaDidier Maruani ngamapolisa